Sidee loo Diiwaan Audio u Free la Tayada Good "
> Resource > Video > Sidee loo Diiwaan Audio u Free
Sidee loo Diiwaan Audio u Free
Audio waa dhexdhexaad ah u kaydiyo Xusuus weyn. Tusaale ahaan, marka aad ka heli hees qurux badan online, oo aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in ay ugu qoraan offline loo maqli karo ama CD ah gubanaya. Waxa kale oo aad ku qori karta audio iyada oo aad makarafoonka u gaar ah marka aad isku dayayaan in ay wax ku bartaan luqad cusub ama ay bartaan inay ku gabyeen gabay. Ma jiraa qalab kasta oo maqal ah si ay u caawiyaan record for free xaaladaha sida? Jawaabtu waa haa. Waxaan soo bandhigi doonaa dhowr qalab aad u sida ay xaalado kala duwan, in uu yahay, duubista ka websites online iyo duubista ka qalabka dibadda on your computer.
Qeybta 1: duubista ka websites online
Qeybta 2: duubista ka qalabka dibadda iyada oo your computer
Waxaa jira websites music badan oo kuu ogolaanaysa inaad sii qulquli music online, sida Spotify iyo xitaa YouTube, goobta video ah, ayaa la siiyaa adeeg geeyo music u gaar ah. Sidaas ma aha wax aan caadi ahayn in lagu qoro cod si uu noqday suuqa weyn inkasta oo la tartamaya badan. Ha welwelin. Waxaan xulanay qaar ka mid ah oo taariikhqorihii ahaa geeyo audio ugu fiican in aad samayn kartaa oo inta badan, oo ay ku jiraan qalab iyo lacag la'aan ah ku bixisay. Bal aan iyaga ka soo hubi hoos ku qoran. Haddii aad u qoraan songs online mar mar, qalab oo lacag la'aan ah lagu talinayaa inta aad u baahan kartaa qalab bixiyo si loo hubiyo tayada wanaagsan ee files music duubay iyo qaab joogto ah marka aad isku daydo in ay u qoraan tiro badan oo heeso online.
Dhiiran yahay editor oo lacag la'aan ah, laakiin xirfad audio. Laakiin waxaa sidoo kale awood u aad si ay u qoraan xaq audio dhex your computer oo ay taageerto Windows, Mac OS X iyo Linux.
Talaabooyinka la isticmaalo dhiiran si ay u qoraan audio ka websites online
Hubi tallaabooyinka hoose oo aad u baahan tahay in la sameeyo goobaha qaar ka mid ah hore. Waxaad gudbin kartaa tutorial dhiiran ee wixii macluumaad dheeraad ah.
Talaabada 1: in la hubiyo in qalabka dhawaaqa kombiyuutarka taageerada loo maqli karo computer duubo. Hubi halkan si aad u aragto sida loo sameeyo. Markaas dooran aqbasho ee dhiiran in ay aqbasho qalabka dhawaaqa ee lagu qorayo loo maqli karo computer.
Talaabada 2: tagaan si ay Preferences diiwaangelinta inuu ka soo leexdo Software Playthrough off.
Talaabada 3: riix Record button oo waxaad tagtaa mid ka mid ah goobaha aad music jecel sida Spotify muusikada ciyaaro. Riix Stop si loo soo afjaro duubay.
Talaabada 4: ugu dambeyntii guji dhoofinta si loo badbaadiyo audio lagu duubay.
Barnaamijkan waxaa si gaar ah loogu talagalay audio duubo ka websites online khasaara eber oo tayo leh. Waxaa ka aqoonsan kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan heeso iyo kuu ogolaanayaa inaad u ciyaaro ee files music duubay kaas oo noqon doona in qaabka MP3 iyo M4A. Waa maxay dheeraad ah, waxaad u isticmaali kartaa in la abuuro ringtones in ay u diraan si ay u telefoonada aad. Baro More >>
Talaabooyinka la isticmaalo Streaming Audio Recorder si ay u qoraan audio ka websites online
Tallaabooyinka wuxuu noqon karaa mid aad u fudud ula kaliya seddex tallaabo. Waxaad ka eegi kartaa this article aad u hesho macluumaad dheeraad ah. Halkan waa warbixin kooban oo ku tallaabooyinka. Waxaad ku siin karaan qalab isku day ah tan iyo markii ay xaqiijin kartaa qaab deggan iyo bixisaa-mar nolosha taageero farsamo.
Burcad Streaming Audio Recorder ah
Bilow si ay u qoraan audio ka websites online
Bedelka diiwaan files audio in Lugood kaliya click ah
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u qoraan audio ka makarafoonka, tusaale ahaan, si ay u abuuraan file maqal ah si ay u soo dir asxaabtaada. Taasi waa mid aad u fudud. Haddii aad isticmaalayso nidaam hawlgal Windows, waxaa jira taariikhqorihii ka dhisay-in dhawaaqa in aad ka faa'iidaysan karto.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in furaysto in qalabka aad dibadda
Talaabooyinka si ay u qoraan audio ka qalabka dibadda
Tallaabooyinka wuxuu noqon karaa mid aad u fudud yahay. Na raaca si ay u hubiso hoos ku qoran.
Talaabada 1: marka hore aad u hesho qalab dibadda ku xiran your computer. Waxaan qaadan doonaa makarafoon sida tusaale.
Talaabada 2: riix Start button on your computer iyo nooca Sound taariikhqorihii sanduuqa raadinta. Riix Sound taariikhqorihii in natiijada baaritaanka ay u bilaabaan barnaamijka.
Talaabada 3: riix Start duubista barnaamijka oo aad bilaabi kartaa in aad la hadasho si aad u makarafoonka.
Talaabada 4: In la joojiyo duubista ah, riix Stop duubista iyo daaqad arbushin doonaa, waayo, waxaad si loo badbaadiyo faylka.
Sida loo Guba YouTube Music inay CD
Sida loo Download Songs From YouTube
Sida loo rogo ama YouTube Songs in MP3 Qaabka
Top 10 shaybaar 4K Video
Download Video Online ah
Sida loo Download MTV Videos ee One Click
Sidee baan u beddeli karaa heerka Video ee Inyar?